18+ Only - Kubata Murume Zvakanaka PaBonde 18+ Only - Kubata Murume Zvakanaka PaBonde
18+ Only - Kubata Murume Zvakanaka PaBonde
Nhasi regai ndibve ndasvika panya yebonde, varume chiiko chavarikumboiti rwa kwavari kutizizira uko kwana Marwei nana Maidei.
Unoona murume achienda nemukadzi wekuti haana kana door parunako as compared newe. Vamwe ndo pamunozozvisimbisa muchiti hanzi varume imbwa dzevanhu.
Ndinoda kupokana nemi madzimai nhasi asi varume hadzisi imbwa, asi hunhu hwunoitwa nevamwe venyu mubedroom ndohweumbwa chaihwo.
Yanguva yechando iyi regai tibve tazvitauriratu zvifumuke. Vakadzi respect your men in the bedroom.
Ndinoziva munopindwa nechando muchibereko but haisi passport yekurara wakazvimonera nembatya kunge mbuya mukwrindindi. Vamwe venyu hamugezi ziya rawaswera naro kubasa kana kumusika kana parendo unongosvikoti njoo mumagumbeze. Dikita rinonhuwa iri vasikana, zvino kana pazvimbo yemunhuwi weperfume ponzwikwa ziya pachakamira mushe here?
Kubata Murume Zvakanaka PaBonde
Mukadzi ndewekugeza wozorawo tumafuta tunonhuwira nekupfapfaidza tumaperfumewo so. Ita tsika yekutanga kunodziisa magumbeze murume asati apinda mubedroom.
The trick iripo ndeyekuti paanopinda mumagumbeze iye anenge achitonhora iwe unenge uchidziya ukamugumbatira haazokuregedza. Uye panoshanda iye inonzi nenamazvikokota mirror neurons bonding and erection system.
Kune vanevarume vanoda zvekudya nhengo dzekuzasi nekulicker manipples it is advisable that when you are preparing yourself for the night do not apply any lotion on you inner thighs breast and navel areas. Ganda remukadzi rinonaka mhezhu mhezhu. Ukaisa malotion ndopaya paunoona kuti unongonanzvwa kaone chete zvobva zvapera. Kana newewo ndikakudyisa mafuta ekuzora ungaada here iwe?
Zvinhu zvandirikutaura izvi vakaosha kwazvo in a relationship because the warmth yaunoproducer semukadzi inoita penetrate right to the pith of your man`s heart and inomuita turn on sexually. Dziisa magumbeze kana apinda womugumbatira zvakasimba kusvika apicker temperature yemugumbeze.
Uchaona kuti the bond between the two of you inochinja for stronger. Izvi zvine psychological effect yekuti murume paadziirwa haakanganwe.
Mukanzwa varume vachiti mukadzi anonaka uyu, they are talking of heat. Heat, heat, heat, maibata here madzimai. Kana ukadziisa murume mushe wherever kwaanoenda anokufunga. Kukangoita kamhepo chinhu chaanotanga kufunga ndiwe. Wosiya nyako yekura wakapfeka mbatya kunge uneshavi.
Zvako zvekuti ukagumwa hanzi hee urikunditonhodza hee swedera uko you are digging your own grave woman. Tichakuviga imomo.
Vamwe venyu vanoshandisa bedroom as a war zone, vamwewo ndovanoshandisa bonde as a bargaining tool. Zvakaipa izvozvo madzimai.
You can only do that at the detriment of your relationship. Chokwadi murume arikuti bonde, kana kuti atanga kukuromancer iwe ndopowotanga hee my hair needs to be done hey makazoti chii nenyaya yecourse yandirikuda kuita hee this and that.
Unechokwadi iwe? Marequest kana hondo yemashoko kunze uko, kana mave mubedroom ziva zvawakavinga. Uye ita basa rako semukadzi.
Varume nhengo dzedu dzakasiyana siyana vamwe vane tudoko, vamwe vane dziripakati nepakati, vamwe vanemambingura mamurutsisa mukadzi chaiwo. Asi basa radzo rimwechete. Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipirawo.
Anyway hazvisiizvo zvandirikuda kutaura nezvazvo, nyaya yangu iri pakuti kana mavekuda kuita bonde nepakuriita ratidza kuti urikuconcentrater uye urikuzvifarira.
Ungakundwe nevaa vanoitisa bonde vachibhadharisa mari? Even iripamukova unonzwa achichemerera nekushanyarika ukabuda anobata achidzorera zvekuti mururme anova neconfidence kutoi haa ndarova zvinhu apa.
Zvino iwe unotoratidza kuti hausi kuzvida, zvirirkutobhowa, pamwe kuti bonde racho ariwane anototanga ambopinda katikasi yemaroma chaiyo.
Pedzezvo murume ozonzi chiita ukururmidze ndoda kurara. Aaah imikaimi!!
Mukati kwamakabva kwaiva nevabereki here imi?
Femerawo mudenga sendere, vhundukirawo so zvinoita vamwe, chemerera zhamba nekunakirwa, kana kubudisa mweya hakurambidzwe. Kwete kuti muripabonde iwe uku uribusy kuchinja machannels e tv.
Participate with all your energy. Izvi zvinomuita motivate and raise his ego to the maximum. Kana mapedza haikona kungoti kwanyanu uyo wakutoenda kana kungofuratira wototanga kuridza ngonono.
Show satisfaction mhani, rara pachipfuva chake kwezvimaminutes wotendawo so kuti maita basa mhazi, mukanya, gono whatever the totem might be.
Wozoenda wonogeza wouuya worara manje. Itirwai zvakanaka muchengetedze dzimba dzenyu.
Adopted By Apostle P. Sibiya